Fijerin’ny AKFM ny fampidirana mpitsoa-ponenana : “Manao kinanga ny fiainam-bahoaka ny mpitondra” | NewsMada
Fijerin’ny AKFM ny fampidirana mpitsoa-ponenana : “Manao kinanga ny fiainam-bahoaka ny mpitondra”
“Raha ny fijerin’ny AKFM azy, tena manao an-kinanga ny fiainam-pirenena sy ny fiainan’ny vahoaka malagasy ny fomba fiasan’izao fitondrana izao.” Izay ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny AKFM, Rakotomanga Eric, momba ny fampidirana na fidiran’ny mpitsoa-ponenana avy any ivelany eto Madagasikara.
“Ahoana no nahatafiditra ny mpitsoa-ponenana eto? Manao ahoana avokoa izany ny fiambenana ireo sisintany rehetra?” hoy izy. Na eny amin’ny seranam-piaramanidina izany, na seranan-tsambo. Sarotra ny mino hoe tsy mahay ny asany ny mpitandro filaminana miambina sisintany.
Fifanarahana avy any ivelany no mahatonga ireny mpitsoa-ponenana ireny ho tafiditra eto, izay tsy iray na roa fa maro. Noho izany, inona no takalon’izany fampidirana olona an-tsokosoko eto izany? Ahoana ny ho vokatr’izany? Satria isika Malagasy eto aza, zara fa velona. Ny mpitsoa-ponenana avy any ivelany indray ve no hiditra eto?
Hiteraka olana maro izany. Tsy vitan’ny eo amin’ny ara-toekarena fotsiny, fa eo amin’ny kolontsaina: manana ny fombany manokana ao anatin’ny fiarahamonina misy azy ny Malagasy. Nefa misy olona izay tsy mitovy amin’ny toe-tsaina sy ny kolontsaina malagasy no tonga eto, tsy maintsy korontana…
Misy takalony ny fidirana na fampidirana mpitsoa-ponenana
“Tsy manana izany fahefa-mividy haka tany izany, angamba, ireo mpitsoa-ponenana”, hoy ihany izy. Fifanarahana avo lenta ny fakana ampahan-tany lehibe etsy sy eroa eto amintsika, izay ifanarahan’ny fanjakana amn’ireny goaibe mpanambola. Nefa tsy maintsy misy takalony ireny. Inona ny takalo nataon’ny fanjakana tamin’ireny goaibe mpanambola ireny, ahafahany mandroba ny tanin’ny Malagasy eran’ny tanàna?
Loza mitaotao amin’ny Malagasy momba an’i Nosy Be Hell Ville, ohatra. Azo lazaina fa lasa vahiny amin’io tany io ny Malagasy. Ankoatra ireo tany hafa izay efa robain’ny fanjakana izany. Tena zava-doza izao fomba fitondrana izao. Satria ny fifanarahana ataony amin’ireny goaibe mpanambola ireny, tsy fantatra mazava hoe inona. “Fa ny takalony no hitan’ny Malagasy hoe lasan’ny vahiny ny tany”, hoy izy.